6Y3519, 6Y3531, ezigbo mma Track Link Assy maka Doz...
Forging nkebi otu maka Shantui bulldozer SD13, SD1 ...
JCB n'elu ihe na-akpụ akpụ ụgbọ ala JCB200 JCB220 JCB240 J...
Ree Excavator E320L recoil spring track adjuster dị ka ...
JCB track roller JCB excavator akụkụ JCB mapụtara akụkụ...
Ngwuputa akụrụngwa excavator egwu
sumitomo SH60 SH100 SH120 egwu akpụkpọ ụkwụ grouser akpụkpọ ụkwụ
CATERPILLAR 415 Mini Traktọ Backhoe Loader maka ọrịre
Obere backhoe excavator atụmatụ, shọvelụ iga iji hụ na mbụ ibu ọrụ na-adịghị emetụta, mgbe nke gwupụtatụrụla akụkụ mpịachi arọ, gwupụtatụrụla ibu akụkụ chassis support, akụkụ abụọ adịghị emetụta ibe ha, ma nwekwara ike inyere onye ọ bụla ọzọ.Power bụ tumadi. kwadebere na anọ-cylinder 490 engine, ihe karịrị 50 horsepower, ike-azọpụta ma rụọ ọrụ nke ọma, ezu ike 30% trotul nwere ike ịbụ nkịtị excavation.Mgbe igwu ala, loading na mgbanwe, oche na-atụgharị n'oge ọ bụla, na mbara anya na mfe ọrụ. .The chassis akụkụ adopts isuzu arọ axle, anọ-ụkwụ mbanye na-onwem na engineering taya, nke nwere ezi cross-mba passability.
Nkume Nkume maka ntọala Pilings Rock Drill Bits Drilling Buckets Teeth
A na-eji ịkwọ ụgbọ mmiri na-egbutu ezé (Ntọala ịkụ ọkpọ ihe, Round Shank cutter bit, Round shank chisel) na-eji dị ka ịdọka ezé na augers, ịkụ ọkpọ na bọket isi maka mkpọ ala, mgbidi siri ike, igwu mmiri nke ọma, trenching, Ngwuputa na tunneling.
Nkwụsị maka egwu rọba
Otu egwu nwere akpụkpọ ụkwụ, nke a na-akpọkwa efere akpụkpọ ụkwụ track, ttrack akpụkpọ ụkwụ assy, ​​bụ otu akụkụ nke akụkụ ndị dị n'okpuru maka crawler arọ equipments dị ka excavator, bulldozer, kreenu, mkpọpu igwe wdg.
Pedal igwe eletrọnịkị maka igwe Sany Crane Road Wheel Loader Zoomlion Crane na Liugong Wheel Loader
Pedal njikwa ọkụ / ọkụ eletrik na-enye akara na injin ECU, yana ECU na-agbanwe ọkọnọ mmanụ dị ka mgbama sitere na igwe eletriki iji chịkwaa ọsọ nke injin.
China rụpụta ịwụ pin na bushing maka ọrịre
Mkpọchi mkpọchi ịwụ ịwụ nke dị maka Hitachi, SANY, XCMG, VOLVO, KOMATSO, KOBELCO, HYUNDAI, CAT Excavators.
Dozer D31P D20 BD2G D50 Swamp Track Shoe Swamp Bulldozer Grouser Tracks maka ọrịre
Na mmepụta, iji gbasaa ndụ nke akpụkpọ ụkwụ apiti, anyị na-eme ọgwụgwọ okpomọkụ na ha.Mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ gasịrị, ike nke elu nwere ike ịbụ 270-320HB.
5D9558 CAT-7D1577 Grader Blade Cutting Edge End bit maka Dozer na Loader
Nhọrọ ihe na elu carbon ígwè ma ọ bụ okpomọkụ mesoo boron ígwè maka dị iche iche ngwa, Dị akụkụ maka niile ọkọlọtọ grader agụba ma ọ bụ ahaziri akụkụ dị ka 5feet / 6feet / 7feet / 8feet / 11hole / 13hole / 15hole / 17hole.
GE T Excavator nkedo na Ịkpụ ezé ịwụ
A na-eji igwe HighSpec Alloy steel na okpomọkụ arụpụtara Cat Direct Replacement Teeth na Adapters
emeso anyị kpọmkwem nkọwa.A na-eji imewe na nyocha kọmputa arụ ọrụ na ọkwa mmepe ka
hụ na ọ dabara adaba na ike kachasị maka akụkụ ọ bụla.Usoro dị mma na ntọala "ọnọdụ nka".
omume na-enye ohere maka ọnụahịa asọmpi nke akụkụ dị mma.N'ụlọ metallurgical ndị ọrụ na ule ụlọ hụ
àgwà na agbanwe agbanwe na ngwaahịa anyị niile emechara.Nsonaazụ bụ akụkụ iyi dị mma nke na-enye uru
onye ahịa mgbe ọ bụla.
Akụkụ hydraulic Excavator R385 R420 R450LC-7 Boom Arm Bucket Cylinder
Gụnyere ọganihu cylinder, ogwe aka cylinder na ịwụ cylinder, nke dị maka Hitachi, Komatsu, Koblco, Carter, Sumitomo, Daewoo (Doosan), Hyundai, Kato, na Samsung excavators yana othe.
ụdị.anyị nwekwara ike hazie omenala dị ka ndị ahịa sample na data.
CAT PPR Oil Link Traktọ Master Link Lubricated Track Chain maka Traktọ
Excavator Long Reach Boom bụ ihe mgbakwunye pụrụ iche maka igwu miri emi na ogologo dị anya na ịdọrọ n'ime ájá na olulu ajịrịja, mkpọda na-akpụ, na-edozi ụlọ akụ, ihicha ọdọ mmiri / ụzọ mmiri.
Ndochi Track Roller Bottom Roller maka Excavator na Dozer
Mgbe emechara ya nke ọma, ike elu nke igwe egwu ahụ ruru HRC 52-58, na omimi nke imenyụ bụ 5-8 mm.Iji hụ na mpụta ahụ n'akụkụ na n'ime ahụ n'akụkụ na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide na-eguzogide na mma elu eyi na-eguzogide, na elu-edu sere n'elu akara usoro nakweere, nke mere na akara arụmọrụ dị ukwuu, na track roller bụ free nke mmezi. .
Sprocket bụ a wheel na inlaid yinye ezé, na-eji na-etinye aka na ngọngọ na ihe ziri ezi pitch na pitch yinye ma ọ bụ USB: a siri ike ma ọ bụ okwu gia na-eme na a yinye na-ebunye motion.Our factory tumadi ngwaahịa niile ụdị nnukwu nonstandard sprockets. dị ka ndị ahịa ịbịaru na chọrọ.Ihe sprocket kwesịrị ịhụ na ezé nwere ike zuru oke ma na-eyi nguzogide, ya mere eze na-eme ka ọ na-ekpochapụ elu ka ọ dịkwuo mma.
123456Ọzọ >>> Peeji nke 1/23